Apple nandefa ny iOS 9 Beta 2 sy ny Watch OS 2 Beta 2 | Vaovao IPhone
Manana andro fandefasana izahay, mandritra ity herinandro ity dia be ny tombantombana momba ny mety fandefasana Apple, manomboka amin'ny iOS 9 Beta2, izay tadidinay amin'ny fotony dia hitondra fiasa sasany toy ny Battery Saver miasa tanteraka, saingy tsy irery izy io, ary izany Apple dia nanapa-kevitra ny handefa ny beta faharoa an'ny Watch OS 2 roa herinandro monja taorian'ny fanombohana ny beta voalohany nandritra ny Keynote tao WWDC15. Andro be tolakandro teo amin'ny birao teo anelanelan'ny famoahana ireo fanavaozana roa ireo ary ny kapoka amin'ny latabatra TaiG manolotra ny Jailbreak ho an'ny iOS 8.3
2 Jereo ny OS 2 - Beta 2
3 Ny Kapiteny koa dia nohavaozina
Ny faran'ny rindrambaiko iray sy ny fiandohan'ny iray hafa, ary antenaina fa tsy handalo ny dikan-teny fahefatra ny iOS 8, na izany aza, ny iOS 9 dia efa mafana loatra, toa nirohotra nanala ny iOS 8 i Apple taorian'ny olana miverimberina miverimberina. na eo aza ny fanatsarana ny endri-javatra dia azo zahana amin'ny ambaratonga rehetra. Navoaka tamin'ny alàlan'ny OTA ny iOS 9 Beta 2 ho an'ny fitaovana izay nametraka ny kinova voalohany amin'ny beta an'ny iOS 9. Ity fananganana vaovao ity dia ny kinova «13A4280e»Ary araka ny naoty ho an'ireo mpamorona, ity fanavaozana vaovao ity dia misy ny fanitsiana ireo bibikely marobe izay, araka ny azonao, iOS 9 dia manana.
Ireto ny sasany amin'ireo fiasa vaovao:
Nohatsaraina ny fifandraisana AirPlay
Afaka manova tenimiafina indray isika ao amin'ny fizarana "Ao anatin'ny fianakaviana" ao amin'ny iCloud
Ny famerenana amin'ny laoniny ny backup dia haingana kokoa
Tsy tapaka intsony ny mailaka rehefa manandrana manonta mailaka
Ny kitendry antoko fahatelo dia miasa ao amin'ny Spotlight
Na izany aza, olana maro hafa no mbola tsy voavaha tamin'ny beta faharoa, raha ny marina ny FaceTime miantso ao amin'ny iPhones 6 sy 6Plus dia tsy mandeha, ary koa amin'ny iPad Air 2. Etsy ankilany, matetika dia midona ny Game Center mandritra ny famoronana. an'ny Apple ID ary ny fampiharana Music dia mahatonga ny fampahalalana hanjavona, ankoatry ny maro hafa. Mazava ho azy, ny fampiharana tafiditra sy nohavaozina dia toa mandeha tsara kokoa, toa ny Wallet ary indrindra ny Notes.Izahay dia efa miandry ny vinavina amin'ny fanjifana bateria izay mandraka ankehitriny dia saika tsy zaka amin'ny iOS 9 izay nahatonga ny fitaovana saika tsy ilaina intsony isan'andro.
Amin'izao fotoana izao dia tadidintsika fa ny iOS 9 dia misy ao amin'ny betas ho an'ny mpamorona, fa angamba amin'ny volana Jolay dia hanapa-kevitra ny handefa a programa beta ho an'ny daholobe ho an'ny iOS 9 tahaka ny nataony tamin'ny iOS 8.4.
Jereo ny OS 2 - Beta 2
Ny kinova vaovaon'ny Watch OS dia mitondra fisehoan-javatra vaovao roa ho an'ny Apple Watch miaraka amin'ny fanampiana efa nandrasana hatry ny ela ho an'ny fampiharana an-trano ao amin'ny Apple Watch. Ity beta vaovao ity dia hahafahan'ny mpandraharaha mihazakazaka fampiharana fampiharana fitsapana mivantana amin'ny Apple Watch ary ireo rindranasa ireo dia hanana fidirana feno amin'ireo sensor an'ny fiambenana ary koa ny satroboninahitra nomerika.
Amin'ny fomba fijery ara-barotra, Watch OS 2 dia hitondra maody vaovao amin'ny alina izay hitantsika tao amin'ny WWDC 15 izay hahafahantsika mahita ny fotoana toy ny hoe manana famantaranandro fanairana amin'ny feo izay tsy mahasosotra ao anaty haizina isika. Ho fanampin'izay, ny loharano fampandrenesana dia ho lehibe kokoa ary hitondra hoditra telo vaovao ho an'ny famantaranandro.
Toa ny iOS 9, ny fanavaozana dia azo alaina amin'ny OTA ho an'ireo mpamorona izay mampiasa Watch OS 2 Beta 1 amin'izao fotoana izao. Betsaka ny mpamorona no nitaraina momba ny fahatapahan'ny bateria sy ny faharetan'ny rafitra Beta 1Na izany aza, tsy afaka manamarina ny fihinanana beta vaovao izahay mandra-pahafantatra bebe kokoa momba azy io sy ny fiovana mety hitranga.
Ny Kapiteny koa dia nohavaozina
OS X El Capitan dia tsy te-tsy hahita ny dihy beta anio, satria nandefa ny Developers Preview faharoa tamin'ny alàlan'ny Mac App Store i Apple. Tahaka ny iOS 9, ny ankamaroan'ny fanatsarana azy dia tonga "ambanin'ny sarona", izany hoe tsy mahita azy ireo isika satria Nanokana ny tenany hamolavola ny rafitra izy ireo mba hahatonga azy io ho marin-toerana, haingam-pandeha ary miasa. Ny endri-javatra vaovao Notes, ny fizarana lamba ary ny fanaraha-maso ny Mission dia efa azo alaina tanteraka.
Hijanona hatrany amin'ny fiovana mety mbola tsy hitantsika izahay. Toy ny amin'ny iOS 9, ny beta ho an'ny daholobe an'ny OS X El Capitan dia andrasana amin'ny volana Jolay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Apple dia namoaka ny iOS 9 Beta 2 sy ny Watch OS 2 Beta 2
Ny vaovao rehetra ao amin'ny iOS 9 beta 2
Vahaolana amin'ny olan'ny 20% sy ny "mpamily tsy hita" rehefa mametraka TaiG jailbreak 2.0.